Woyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite? Oromoon immoo – Kichuu
HomeAfaan OromooTVWoyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite? Oromoon immoo
5. Oromiyaa Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraa naannawuun hafuura tokkummaa keessatti uume. Keessattuu qondaalotni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa #Finfinnetti konsartii qophaaye irratti argamuun geerrarsi akka Haacaaluu Hundeessaa kan diinatti ifa guyyaa dukkaneessu bira jiraachuun ergaa cimaa woyyaaneetti dabarse. Hubadhaa yeroo #Haaceen handhuura Oromiyaa #Finfinnee keessa dhaabbatee dubbii 4-kiloo kaase qondaalotni kuni bira jiru. Artistoota duri maqaa ABOtiin mootummaa baqatantu har’a motora qabsoo isaanii ta’e. Kuni woyyaanee maraache.
Hubadhaa. Ummatni akkuma hogganaa isaaf hin taane aangoo gubbaa buusuuf humna qabu, hogganaa jaalatus tikfachuufis humna qaba. Fknf bara 2016 keessa gaafa humna hin beekkamneen qindaayee ( USA dha jedha gariin) waraanni biyya Turkey mootummaa Turkey Obbo #Erdogan irratti fonqolcha gaggeesse Ummatni Turkey mootummaa sana baay’ee waan jaalatuuf taankii fi bombii jalatti kufee, lubbuun namoota 265 oli erga ajjeefamtee booda peresdanticha jaalatamaa sana aangoo gubbatti hambifatee seenaa dalage. Ammas bulchutti jira. Nutis nama nuuf ta’u yeroo hedduu Yeroo woyyaaneen ukkaamsitu callisnus, amma booda nama nuuf ta’u ni tikfanna.
VOA Amharic Radio News February 11, 2018 – የአማርኛ ዜና ዜና የካቲት 11, 2018